परमिताको नयाँ हेयर स्टाइलले जाडोमा के गर्ला ? – Mero Film
परमिताको नयाँ हेयर स्टाइलले जाडोमा के गर्ला ?
अभिनेत्री परमिता आर एल राणाका लागि यो बर्ष फाप्ने लक्षण देखिएको छ । रोज असफल भएपनि उनलाई मन पराउनेको संख्या बढेकै हो । अब चंगाचेट फिल्ममा पनि उनको प्रशंसा भैरहेकै छ । फिल्म रिलिज पछि के हुन्छ पछी नै थाहा होला । परमिता आफूले पाउँदै गरेको सफलतामा फुरुङ्ग होलिन् ।
परमिता फेसनमा पनि उस्तै रुची राख्ने अभिनेत्री हुन् । उनको हरेक स्टाइल उनका फ्यानका लागि फलो गर्ने माध्यम पनि बन्न सक्छ । परमिताले यो जाडोका लागि आफ्नो कपालको स्टाइल बदलेकी छिन् । परमिताको यो लुक हेर्दा झट्ट उनलाई चिनिदैन । तर, परमिता भने यही कपाल बोकेर जाडो महिनामा बबाल मच्चाउने धुनमा लागेकी छिन् ।
परमिताले नयाँ हेयर स्टाइल भन्दै राखेको तस्बिरमा उनी भिन्न देखिएकी छिन् । तर, कपालले नै बबाल मच्चाउने कुरा चै हजम भएन है । अभिनय राम्रो गरिन् भने चाँही उनले फिल्म क्षेत्रमा बबाल मच्चाउलिन् । तर, कपाल पनि नराम्रो छैन है ।
२०७५ कार्तिक ८ गते ११:२३ मा प्रकाशित
अजय देवगणले किने ६० करोडमा घर
ह्याप्पी बर्डे शिव श्रेष्ठ
मेलम्चीबासीलाई दीपाश्री र स्वस्तिको ५०–५० थान ब्ल्याङ्केट र म्याट
नेपालमा हलिउड फिल्मको छायांकनका लागि पहल गर्ने राजदूत युवराज खतिवडा भनाई
चौध व्यत्तीबाट अभिनेत्रीमाथि यौन शोषण
पहिलो पटक बायोपिकमा अभिनय गर्दै सलमान खान